ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेश कुटनीतिमा सुधारको संकेत देखिएको छ – Maitri News
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेश कुटनीतिमा सुधारको संकेत देखिएको छ
अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति विभाग प्रमुख
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति विभाग प्रमुख खड्क केसीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हाम्रो मुलुक निकै लामो संक्रमणपछि संविधान निर्माण गरेर आर्थिक संमृद्धिको दिशातर्फ अघि बढेको छ । यो बीचमा दुई–तीन चरणका निर्वाचन पनि सम्पन्न भएपछि अब मुलुकमा करीब संक्रमणकाल सकिएको हो भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा हामी रहेका छौँ । अब हाम्रा सामू मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यहि अवस्थामा हाम्रा शक्तिशाली दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगै अन्य मित्रराष्ट्रबाट पनि हामीले सिक्नु पर्ने धेरै कुरा छन् । यो सँगै हाम्रो मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि लिनु पर्ने र सिक्नु पर्ने पनि धेरै छ । त्यसैले यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्वोडिया भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
कुटनीतिक सम्बन्ध यो भ्रमणले अझ बलियो होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
भियनताम र कम्वोडियासँग हाम्रो सम्वन्ध निकै पुरानो हो । तर, यो प्रकारको उच्चस्तरको भ्रमण अहिलेसम्म ती दुई मुलुकसँग भएको थिए । त्यसले पनि यो उच्चस्तरको कुटनीतिक भ्रमणले निकै ठूलो महत्व राख्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भ्रमण एक हिसावले हेर्ने हो भने कुटनीतिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सकारात्मक पहल पनि हो । यद्यपि भोलि के होला भनी हेर्ने कुरा चाँहि बाँकी नै छ ।
कम्वोडिया कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपाल भन्दा निकै पछाडि रहेको मुलुक हो । तर, अहिले त्यो मुलुकले नेपाललाई निकै पछि पारेको छ । त्यसकारण पनि आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढेको नेपाल जस्तो मुलुकले त्यो मुलुकबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ ।
भियतनाले जसरी चीनको मोडेलमा चीन जस्तै अर्थ र राजनीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन यी दुई मुलुकले अघि बढाएको आर्थिक मोडेलबाट पनि नेपालले केही सिक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले मुख्य गरेर लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट केही सिक्न सकिन्छ । नीति परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट केही सिक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । पर्यटन प्रर्बद्धनलगायतका क्षेत्रमा पनि त्यहाँ केही सम्झौता भएका भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
कुटनीतिक हिसावले चाँहि भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ ?
निश्चय पनि यो भ्रमण कुटनीतिक हिसावले पनि अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । त्यो सँगै ती मुलुकले छोटो समयमै गरेका उपलब्धीहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने अबसर प्राप्त भएको छ । ती मुलुकले गरेको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि गरेको उपलब्धीका बारेमा पनि सिक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, यसलाई उपलब्धीमा बदल्नु पर्ने जिम्मेवारी भने सरकारकै इच्छा शक्तिमा भर पर्छ । धार्मिक हिसावले पनि यो भ्रमण निकै उपलब्धीपूर्ण मान्न सकिन्छ । त्यहाँबाट हिन्दु र बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने धर्मालम्बीहरुलाई पनि नेपालको पर्यटनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ र नेपालको पर्यटन प्रर्बद्धमा त्यसले टेवा पुर्याउने निश्चित छ । त्यसले लगानी प्रर्बद्धमान पनि थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएका छन् । त्यो बारेमा नि ?
भियतनाम अहिले बजारमुखी अर्थतन्त्र अपनाएर आर्थिक समृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । मैले अघि पनि भने हामीले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । जहाँसम्म लगानीको कुरा छ । त्यसले ती देश र नेपालबीच उत्पादन भएका बस्तु आयात–निर्यातमा सहज गराउन सकियो भने त्यसले अझ बढी अर्थ राख्छ भन्ने लाग्छ । उनीहरुसँग समुन्द्रसम्मको पुहँच छ । त्यसकारण पनि ती मुलुकसँगको सम्झौता वा कुटनीतिले नेपाललाई फाइदा नै गर्छ भन्ने लागेको छ । उनीहरुले त्यो कारण पनि विश्वका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेका छन् । हामी समुन्द्रको पहुँचबाट टाढा छौँ । त्यसैले हामीले अहिले नै उनीहरुको जस्तो उपलब्धी हाँसिल गरि हालौला भन्ने अपेक्षा पनि अलिक बढी नै हुन पनि सक्छ । यद्यपि हामीले सबै भन्दा पहिला त दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । हामीले यी दुई मुलुकसँग मात्रै राम्रो सम्वन्ध बनाउन सक्ने हो भने अरु मुलुकसँग हामीले लगानीका लागि खासै टाढा जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ । कुटनीतिक तथा विशेष राहादानी प्राप्त कर्मचारीका लागि भिषा छुट सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा भएको सम्झौताले पर्यटन प्रर्बद्धमा केही हदसम्म भए पनि भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ । यो सम्झौता तपाईँहरुलाई नेपाल स्वागत गर्न तयार छ है भन्ने कुराको संकेत हो भन्ने हिसावबाट पनि बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिले स्थायी सरकार छ । कुटनीतिक हिसावले पनि केही प्रगति गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि सबै भन्दा पहिला घरभित्रको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्नु पनि अर्को आवश्यकता छ । यो भयो भने हामीले छिमेक र अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्वन्ध विस्तार गर्न थप सहज हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले सबै भन्दा पहिला यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुईतिहाई नजिकको स्थायी सरकार छ । यो सरकारले सबै भन्दा पहिला अघि मैले माथि नै भने जस्तै भ्रष्टार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिएर घर भित्रको समस्या समाधानमा पहल गर्ने हो भने विदेश कुटनीतिमा सफलता हाँसिल गर्न अवश्य सक्छ । त्यो सगैँ दण्डहिनताको अन्त्य र स्रोतको न्यायोचित वितरण पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यो भयो भने सरकारले अघि सारेर ‘शुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण’को अभियानले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा गरेको औपचारिक भ्रमण त्योसँगै राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र संघमा गरेको सम्वोधन र भएका साइडलाईन बार्ता जस्ता कुराले पनि कुटनीति केही सुधारउन्मुख रहेको भन्न सकिन्छ । तर, यतिले पनि अझै पुगेको छैन ।
Previous Previous post: प्रदेश र राजधानी टुङ्ग्याउँदै प्रदेश नम्बर तीन
Next Next post: सगरमाथा आरोहणमा कामिरिता २३औं पटक शिखरमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान